Global Voices teny Malagasy · Mialy Andriamananjara – Momba ny mpandray anjara
Nanomboka nandika tamin'ny 11 Septambra 2007 · 52 Lahatsoratra
Mazoto mitoraka blaogy hatramin'ny 2004.
Sady reny, no vady, no zanaka vavy, no anabavy, no rahavavy, no namana ihany koa.
Tia manoratra ny momba ny vehivavy mpiavy sy mpila ravinahitra aty ivelany aty.
imailaka Mialy Andriamananjara
Lahatsoratra farany an'i Mialy Andriamananjara
28 Septambra 2018
Mpanoratra Mialy Andriamananjara · Madagasikara
02 Aogositra 2018
Madagasikara : Alin'ny Fandrobàna, Tsy Tao An-drenivohitra Ny Filoha Ravalomanana
Maro ny tsaho momba ny zava-niseho tamin'ny 26 janoary 2009. Mitatitra ny momba izany ny ankamaroan'ireo mpitoraka bilaogy sy ny haba-tranonkala malagasy.
12 Septambra 2017
Repoblika Demaokratikan'i Kongo : Miantraika Amin'ny Ezaka Ho Fiarovana ny Babakoto ny Ady
Mpanoratra Juliana Rotich · R.D. Kongo
Halina, efa taraiky be vao tafaverina ny mpiambina iray avy ato aminay, efa nila ho faty. Rehefa niezaka ny nivoaka niaraka tamin'ny andiany kely misy azy izy mba hijery izay misy ireo babakoto, dia nisy olona nirongo fiadiana nanafika azy ireo.
20 Janoary 2014
Nahazo Filoha Vaovao Ihany i Madagasikara, Saingy Mbola Manjazozavo Ny Toe-dRaharaha
Midika ve izany fa miverina mankany amin'ny lalan'ny demokrasia i Madagasikara? Ho hita eny amin'ny faravodilanitr'ilay firenena tafahitsoka ao anatin'ny tsy fitombenana hatrany sy ny fikorisana tsy mitsahatra mankany amin'ny fahantrana ihany ve ny fitomboan-karena sy ny fandriampahalemana?
21 Novambra 2013
Ho Avy Ny Fihodinana Faharoan'ny Fifidianana Nandrasana Hatry ny Ela Teto Madagasikara
Jean-Louis Robinson nahazo ny 21,1 isanjaton'ny safidy, ary i Hery Rajaonarimampianina nahazo ny tokotokony ho 15,9 isan-jato. Efa nomanina ho amin'ny 20 desambra ny fihodinana faharoa, saingy maro ny fanontaniana mbola mitoetra.
Madagasikara: Mbola Eo Ampiandrasana Voka-Pifidianana Ho Filoham-Pirenena
Efa herinandro izay no lasa hatramin'ny nifidianan'ny teto amin'ny firenena izay ho filoham-pirenena vaovao izay sambany hatramin'ny nisian'ny fanonganam-panjakana tamin'ny 2009.
Mitaintaina i Madagasikara Raha Miatrika ny Fifidianana
Miandry tsy lavo loha ireo valim-pifidianana ny vahoaka eto Madagasikara, taorian'ny androm-pifidianana makotrokotroka.
25 Janoary 2012
Madagasikara: Dia Ahoana Ny Manaraka Rehefa Tsy Tafody Ny Filoha Teo Aloha?
Tamim-pitaintainana no niandrasan'ny Malagasy ity fikasan-dRavalomanana hody ity rehefa sesintany nandritra ny telo taona ny tenany. Mamakafaka ny toe-draharaham-pirenena sy ny mety ho tohiny ny mpamaham-bolongana.
02 Desambra 2010
Nodimandry i Elie Rajaonarison, Mpanakanto Malagasy Malaza
Elie Rajaonarison, poeta Malagasy iray, dia nodimandry ny 27 Novambra 2010 teo amin'ny faha-59 taonany. Mpanakanto feno, efa Sekreteran'ny Kolontsaina. Namoaka bokin-tononkalo koa izy, ary nandika an'i Jacques Prevert, poeta Frantsay iray ho amin'ny teny Malagasy. Mahatsiaro ny andro niainany sy ny zava-bitany ireo mpitoraka bilaogy.
Novambra 2019 20 Lahatsoratra
Jolay 2019 168 Lahatsoratra